Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.2.1 မပြည့်စုံ
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်လုပ်ချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မရှိပါဘူးဘယ်လို "ကြီးမားသော" သင်၏ "ကြီးမားတဲ့ဒေတာ" ။
အများစုဟာကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်သူတို့သင်သည်သင်၏သုတေသနအတွက်ချင်သောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသဘောရှိ, မပြည့်စုံပါ၏။ ဒီသုတေသနကိုထက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးထားခဲ့သောအချက်အလက်များ၏ဘုံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များကပြီးသားထိုကဲ့သို့သောသင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမမေးဘဲရှိပြီးသားစစ်တမ်းသကဲ့သို့, မပြည့်စုံနှင့်အတူဆက်ဆံ၏အတှေ့အကွုံခဲ့ကြပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, မပြည့်စုံ၏ပြဿနာများကြီးမားဒေတာအတွက်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သီအိုရီ Construction operationalize မှသူရဲ့လူဦးရေ, အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အမူအကျင့်များနှင့်ဒေတာများ: ငါ့အတှေ့အကွုံခုနှစ်, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုလူမှုရေးသုတေသနအတွက်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏သုံးမျိုးပျောက်ဆုံးခံရဖို့ကြတယ်။
မပြည့်စုံသောဤပုံစံများကိုအားလုံးသုံး Gueorgi Kossinets နှင့် Duncan က Watts အားဖြင့်တစ်ဦးလေ့လာမှုမှာသရုပ်ဖော်ကြသည် (2006) တက္ကသိုလ်မှာလူမှုကွန်ယက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. ။ Kossinets နှင့် Watts (ထိုသုတေသီများအီးမေးလ်များများ၏ content မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ) အဘယျအခြိနျမှာဘယ်သူကိုမှအီးမေးလ်များကိုစေလွှတ်တော်မူသောအကြောင်းတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များခဲ့သောတက္ကသိုလ်ကနေအီးမေးလ်သစ်လုံးနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ ယင်းအီးမေးလ်မှတ်တမ်းများကွ-နေသော်လည်းသူတို့၏အရွယ်အစားနှင့်အသေးစိတ်-အခြေခံကျကျမပြည့်စုံ, အံ့သြဖွယ် Datasets ကဲ့သို့မြည်ပေမယ့်။ ဥပမာအားဖြင့်, အီးမေးလ်သစ်လုံးထိုကဲ့သို့သောကျားမနှင့်အသက်အရွယ်အဖြစ်ကျောင်းသားများ၏လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်းကိုဒေတာမပါဝင်ပါဘူး။ ထို့ပြင်အီးမေးလ်သစ်လုံးထိုကဲ့သို့သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားပြောဆိုချက်အဖြစ်အခြားမီဒီယာ, မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမပါဝင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အီးမေးလ်သစ်လုံးတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးကို, အများအပြားရှိပြီးသားသီအိုရီအတွက်သီအိုရီ Construction အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မပါဝင်ပါဘူး။ ငါသုတေသနလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာများအကြောင်းပြောဆိုကြသောအခါနောက်ပိုင်းအခန်း၌, သငျသညျ Kossinets နှင့် Watts ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
မပြည့်စုံ၏သုံးမျိုး၏, သီအိုရီ Construction operationalize မှမပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါသည်, ငါ့အတှေ့အကွုံအတွက်ကြောင့်မကြာခဏမတော်တဆဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်, သီအိုရီ Construction လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာဖို့ကစိတ္တဇအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာ, အဲဒီ Construction အမြဲတည်ပြီးသတ်တယ်သတ်မှတ်ပါတယ်နှင့်တိုင်းတာမရနိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့မျက်မြင်လက်တွေ့ပိုပြီးအသိဉာဏ်နေသောလူကိုပိုငွေရှာသောပုံရိုးရှင်းတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားနေစိတ်ကူးကြကုန်အံ့။ သငျသညျကိုတိုင်းတာရန်လိုဤပြောဆိုချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ "ထောက်လှမ်းရေး။ " အမိန့်ခုနှစ်တွင်သို့သော်ထောက်လှမ်းရေးကားအဘယ်သို့နည်း ဥပမာအားဖြင့်, Gardner (2011) ထောက်လှမ်းရေး၏ရှစ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်အညီ, တိကျစွာထောက်လှမ်းရေး၏ဤပုံစံများကိုမဆိုကိုတိုင်းတာနိုင်ကြောင်းလုပျထုံးလုပျနညျးမြားရှိသနညျး စိတ်ပညာရှင်များကအလုပ်၏ကြီးမားသောပမာဏနေသော်လည်းဤမေးခွန်းများကိုဆဲတည်ပြီးသတ်တယ်အဖြေကိုမရှိဘူး။ ကဒေတာအတွက်သီအိုရီ Construction operationalize ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်သောကြောင့်, ပို. ပင်အသိဉာဏ်နေသောတစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပြောဆိုချက်ကို-လူကိုပိုပြီးဝင်ငွေပိုက်ဆံ-နိုင်မျက်မြင်လက်တွေ့အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ "စံချိန်စံညွှန်း," "လူမှုရေးအရင်းအနှီး," နှင့် "ဒီမိုကရေစီပါဝင် operationalize ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ဖြစ်ကြောင်းသီအိုရီ Construction ၏အခြားဥပမာ။ " လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒေတာများဆောက်လုပ်ရေးသက်တမ်းအကြားပွဲစဉ်သို့ခေါ် (Cronbach and Meehl 1955) ။ ထိုအ, ဆောက်လုပ်ရေး၏ဤစာရင်းသက်တမ်းတည်ဆောက်ရန်, အကြံပြုအဖြစ်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသူတို့သုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကောက်ယူခဲ့ကွောငျးဒေတာနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလျှင်ပင်အလွန်ရှည်သောအချိန်များအတွက်နှင့်အတူရုန်းကန်ပြီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနလုပ်ငန်းထက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုဆောင်းဒေတာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ, ဆောက်လုပ်ရေးသက်တမ်း၏ပြဿနာများ ပို. ပင်စိန်ခေါ်မှုများမှာ (Lazer 2015) ။
သင်တစ်ဦးသုတေသနစာတမ်းဖတ်နေကြသောအခါ, ဆောက်လုပ်ရေးသက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကဲဖြတ်ရန်တစ်မြန်ဆန်အသုံးဝင်သောလမ်းများသောအားဖြင့် Construction ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့စက္ကူ, အတွက်အဓိကပြောဆိုချက်ကို ယူ. , အသုံးပြုတဲ့ဒေတာကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပိုပြီးအသိဉာဏ်ကလူကိုပိုပြီးငွေရှာကြောင်းပြသဆိုနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာမှုများဆင်ခြင်လော့
1 လေ့လာဖို့: သရုပ်ခွဲထောက်လှမ်းရေး၏ Raven တိုးတက်ရေးပါတီမက်တရစ်စာမေးပွဲ-တစ်ဦးကောင်းစွာလေ့လာစမ်းသပ်မှုအပေါ်ကောင်းစွာဂိုးသွင်းတဲ့သူကလူ (Carpenter, Just, and Shell 1990) မြင့်မားသူတို့ရဲ့အခွန်ပြန်ပေါ်ဝင်ငွေဖော်ပြခဲ့သည် -have
2 လေ့လာဖို့: ကြာကြာစကားသည်သုံးတဲ့သူကို Twitter ပေါ်တွင်လူဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့ပိုများပါတယ်
နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်သုတေသီများသူတို့ကပိုအသိဉာဏျကလူကိုပိုပြီးငွေရှာကြောင်းပြသပြီဟုအခိုင်အမာနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုအတွက်သီအိုရီ Construction ကောင်းစွာဒေတာများက operationalized ကြသည်ကို၎င်း, ဒုတိယအတွက်သူတို့မရှိကြပေ။ ဒီဥပမာသရုပ်ဖော်အဖြစ်နောက်ထပ်, ပိုဒေတာအလိုအလြောကျ Construction သက်တမ်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မထားဘူး။ သင်ကတစ်ဦးသန်းမှာ tweet, တစ်ဘီလီယံခန့်မှာ tweet, ဒါမှမဟုတ်တစ်ထရီလီယံမှာ tweet ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာမှု2၏ရလဒ်များကိုသံသယသင့်သည်။ Construction သက်တမ်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်သုတေသီများမအဘို့, စားပွဲတင် 2.2 ဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စဒေတာကို အသုံးပြု. သီအိုရီ Construction operationalized ပြီလေ့လာမှုများအချို့ကိုဥပမာပေးစွမ်းသည်။
စားပွဲတင် 2.2: ပိုပြီးစိတ္တဇသီအိုရီသဘောတရားများ၏အစီအမံအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်ဟုဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ၏ဥပမာများ။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီပွဲစဉ် Construction သက်တမ်းမခေါ်နဲ့လူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များ အသုံးပြု. နှင့်အတူအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ် (Lazer 2015) ။
(သာ Meta-Data) တက္ကသိုလ်ကနေအီးမေးလ်ကိုသစ်လုံး လူမှုဆက်ဆံရေး Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Weibo ပေါ်ကလူမှုရေးမီဒီယာ၏ရေးသားချက်များ Civic ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Zhang (2016)
အခိုငျအမာ (Meta-အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံသောစာသား) မှအီးမေးလ်ကိုသစ်လုံး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်ယဉ်ကျေးမှုမထိုက်မတန် Goldberg et al. (2015)
စစ်ဆင်ရေးသီအိုရီဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တော်တော်လေးခဲယဉ်းပေမဲ့, မပြည့်စုံလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အမူအကျင့်အပေါ်မပြည့်စုံအချက်အလက်များ၏ပြဿနာကိုမှသုံးဘုံဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတကယ်တော့သင်လိုအပ်တဲ့ဒေတာစုဆောင်းဖို့ဖြစ်၏ ငါစစ်တမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင်ပြောပြသောအခါငါအခန်း3မှာကဥပမာတစ်ခုပြောပြဦးမယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒေတာစုဆောင်းဒီလိုမျိုးအမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒုတိယအဓိကဖြေရှင်းချက်ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များအသုံးပြုသူ-attribute ကိုအခြနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များကရှိသည်ဟုမှတ်စရာမခေါ်မခေါ်ဘယျသို့ပွုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၌, သုတေသီများအခြားလူမျိုး၏ဂုဏ်တော်များအခြမှလူတချို့အပေါ်သူတို့ရှိသည်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ တတိယဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းချက်-The Kossinets နှင့်အသုံးပြုသောတစ်မျိုးစုံဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များပေါင်းစပ်ဖို့ Watts-ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတခါတရံပေါင်းစည်းသို့မဟုတ်စံချိန်ချိတ်ဆက်ဟုခေါ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးဥပစာအစဉ်အဆက်စံချိန်ချိတ်ဆက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အလွန်ပထမဆုံးစက္ကူအလွန်ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်အတွက်အဆိုပြုခဲ့သည် (Dunn 1946) :
"ဤလောကအတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးဟာဘဝတစ်စာအုပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကလေးမွေးဖွားအတူစတင်သည်နှင့်သေခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ၎င်း၏စာမျက်နှာများကိုအသက်တာ၌နိယာမဖြစ်ရပ်များ၏မှတ်တမ်းများကိုတက်ထားကြပါတယ်။ စံချိန်ချိတ်ဆက်နေတဲ့အသံအတိုးအကျယ်သို့ဤစာစောင်၏စာမကျြနှာတပ်ဆင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးပြီးမှနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ "
ဤကျမ်းပိုဒ် 1946 ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့, ထိုကာလအခါ, လူတွေဘဝက၏စာအုပ်ကလေးမွေးဖွား, အိမ်ထောင်ရေး, ကွာရှင်းနှင့်သေမင်းကဲ့သို့အဓိကဘဝဖြစ်ရပ်များပါဝင်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယခုလူအကြောင်းကိုဤမျှလောက်သတင်းအချက်အလက်မှတျတမျးတငျထား, ဘဝအသက်တာ၏စာအုပ်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်ပုံတူဖြစ်နိုင်ကြောင်း, သူတို့အားကွဲပြားခြားနားသောစာမကျြနှာ (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ) သည်မှန်လျှင်, အတူတူခညျြနှောငျနိုငျသညျ။ ဘဝအသက်တာ၏ဤစာအုပ်သုတေသီများအဘို့ကြီးစွာသောသယံဇာတဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘဝက၏စာအုပ်လည်းပျက်စီးခြင်း၏ဒေတာဘေ့စဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ကြောင်း (Ohm 2010) ငါကိုအောက်တွင်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များကစုဆောင်းကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်များ၏ထိခိုက်မခံတဲ့သဘာဝအကြောင်းပြောဆိုကြသောအခါပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, သိက္ခာမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော, နှင့်အခန်း6(Ethics) ၌တည်၏။